Ahoana no hialana amin'ny fisaraham-panambadiana mahatsiravina | Bezzia
Ahoana ny fomba hialana amin'ny fisaraham-panambadiana mampivadi-po
Maria Jose Roldan | 11/10/2021 22:37 | fifandraisana
Ny fisaraham-panambadiana dia mety hitovy amin'ny fahafatesana ary toy izany, Mila mandalo dingana mampalahelo ianao handresena olana toy izany. Izy io dia veloma farany amin'ny fiainana nofinofy sy ny ho avy miaraka amin'ilay olona tianao. Izany no antony mahatonga ny fisaraham-panambadiana ho tena trauma mafy ho an'ny olona maro.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia holazainay aminao ny fomba hihoarana ny alahelon'ny fisaraham-panambadiana ary afaka manomboka fiainana vaovao amin'ity fomba ity.
Tsy maintsy manomboka amin'ny fototra ianao, fa tsy misy fisaraham-panambadiana roa mitovy ary ny antony dia mety ho maro sy isan-karazany. Raha misy fanapahan-kevitra sarotra raisina dia tsara ny manaraka toro-hevitra maromaro izay mahatonga ny fizotran'ny fisarahana amin'ilay olon-tiana ho azo zakaina kokoa:
Voalohany indrindra ary ny zava-dehibe indrindra dia ny fanekena ny fisaraham-panambadiana. Tena ara-dalàna sy mahazatra ny vidiny amin'ny voalohany, satria midika izany hoe mahafoy nofy sy drafitra izay tsy ho tanterahina intsony. Raha tsy azo amboarina ny raharaha dia tsy ilaina ny tsy manaiky ny zava-misy. Na dia mety ho mafy sy mahakivy aza izany dia tsara kokoa ny manaiky ny fisaraham-panambadiana fa tsy manasaro-javatra kokoa.
Tsy tokony hitokantokana ilay olona ary hiezaka hanarina ny fiainany. Manoloana ny fotoan-tsarotra toy izany dia tsara ny manodidina anao amin'ny olona akaiky anao afaka maneho fihetseham-po sy fahatsapana samihafa.
Na dia mety tsy ho vita aza izany dia zava-dehibe ny mijery mialoha ary jereo ny fiainana amin'ny fanantenana lehibe indrindra. Rehefa mandeha ny fotoana dia hisy nofy sy drafitra vaovao hiseho na dia tsy eo intsony aza ilay olon-tiana.
Tsara ny maka lesona avy amin'ny lesoka natao mba hankafizanao ny fiainana indray. Ny traikefa dia diplaoma ary mila miala amin'ny fisaraham-panambadiana ianao.
Mba hahasambatra dia tsy mila manana mpiara-miasa aminy ianao hizarana fahatsapana toy izany. Tokony hahafantatra ny fomba hianaranao irery ianao fa tsy hiankina amin'ny olon-kafa raha ny fahitana fahasambarana.
Raha na eo aza ny voalaza rehetra dia mbola tsy maharesy ny fisaraham-panambadiana ianao, tsy hevitra ratsy ny mitady fanampiana amin'ny matihanina. Ny olona toy ny psikology dia afaka manampy anao hitantana fihetsem-po samihafa. Amin'ny fotoana ahafahana mandresy fotoana fohy na mafy toy ny fisarahan'ny olon-tiana aza, tena ilaina ny mahafantatra ny fomba fampitana ny fihetseham-po isan-karazany amin'ny fotoana rehetra.
Raha fintinina, Tsy mora na tsotra ny miala amin'ny fisaraham-panambadiana ataon'ny olona iray tianao. Zava-dehibe ny fahafantarana ny antony nisarahan'ny fifandraisana ary manomboka eto dia ataovy izay rehetra azo atao mba tsy ho ela ny fizotran'ny alahelo. Betsaka ny olona mamadika ny fisaraham-panambadiana ho tena trauma fa tena sarotra ny mivoaka. Amin'ny tranga sasany dia tsy maharesy irery ny fisaraham-panambadiana ilay olona ary voatery mangataka fanampiana amin'ny matihanina izy ireo mba hanampiana azy ireo handresy fotoana sarotra toy ny fisarahana amin'ny mpivady mandrakizay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ahoana ny fomba hialana amin'ny fisaraham-panambadiana mampivadi-po
Cheesecake Brownie miaraka amin'ny dulce de leche sy kanelina
Hevitra handravahana ny tranonao amin'ny piano lehibe